खै वार्ता? खै सहमति? -डा. गोविन्दबहादुर थापा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:०२ English
खै वार्ता? खै सहमति? -डा. गोविन्दबहादुर थापा
दलहरूको बैठक बिगत केही दिनदेखि पुनःस्थगित भएको छ। पार्टीहरू कसैले आफ्नो अडानमा अलिकति पनि लचकता नदेखाउने तर सहमतिको बिकल्प छैन चाहिं भनिरहनुको के अर्थ? ”सहमतिको बिकल्प छैन” भन्ने राग अलाप सुन्दासुन्दा जनताका कान टट्टाई सके, तर सहमति हुने कहिल्यै होइन। पार्टीहरू आफ्नो एजेण्डामा अरु पार्टी आए सहमति हुन्छ अन्यथा हुदैन भन्छन्। यसरी कहाँ सहमति हुन्छ? त्यसैले यदि दलहरूले साँच्चिकै सहमति चाहेका हुन् भने उनीहरू सबैले आ―आफ्नो अडानमा पुनर्बिचार गर्नै पर्दछ।
नेपालका दलहरू लोकतन्त्रमा दलहरूको बिकल्प नभएकोले उनीहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ, केही नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छन्। हालसम्मको यथार्थ लोकतन्त्रमा दलहरूको बिकल्प नहुनु नै हो तर यस्तै गैह्र जिम्मेवारीपन, अकर्मन्यता र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मात्र दलहरू लामो समयसम्म अल्मलिई रहने हो र जनता उपेक्षित भईरहने हो भने जनता जस्तोसुकै बिकल्प खोज्न पनि बाध्य हुनेछन् भन्ने कुरा दलहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ। अतः दलहरू यो राजनीतिक शून्यता, अन्यौल चिर्न र गणतान्त्रिक नेपाल जोगाउन चाहन्छन् भने बिल्कुलै बिलम्ब नगरी सक्रियतापूर्वक लाग्नै पर्दछ। स्थिति हातबाट बाहिर गयो भने पछि पछुताउनु सिबाय अरु केही बाँकी रहने छैन।
दलहरू बीच सहमति नभई कुनै पनि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने राष्ट्रपतिको हालैको भनाईले एमाओवादीमाथि अन्य दलहरूसंग आफ्ना अडानमा केही लचकता देखाएर कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सहितको सहमति गर्ने वा राष्ट्रपति बिरुद्ध उत्रने दुई मात्र विकल्प दिएको छ। अतः एमाओबादीले यो असोज महिनाभित्र यस कुराको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने असोज मसान्तमा यो वर्षको तीन महिने बजेटको अबधि पूरा हुन्छ र त्यस भित्र पूर्णाङ्क बजेटको अध्यादेश जारी हुन नसके कात्तिक एक गतेदेखि सरकारलाई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुदैन। र, त्यस्तो बजेट ल्याउनका लागि सरकारले अन्य दलहरूसंग सहमति गर्नै पर्दछ। यसरी एमाओवादी अगाडि अहिले यस्तो दुर्भेद्य बाध्यात्मक स्थिति खडा भएको छ। यो संकटबाट पार पाउन एमाओवादीले आन्तरिक रुपमा कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। तर यति गंभीर विषयमा उसले केही न केही त पक्कै गरिरहेको हुनुपर्दछ।
राष्ट्रपति विरुद्ध उत्रने कुरा उसलाई त्यति सहज हुदैन। किनभने त्यसो गर्दा उसले चाहीनचाही लोकतन्त्र प्रतिहालसम्म देखाई रहेको प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशंका उब्जिन्छ र राष्ट्रपति बिरुद्ध उत्रंदा उसलाई कुनै खास उपलब्धि हासिल हुनेवाला पनि छैन। त्यसैले उसलाई अब दलहरूसंग सहमति नगरी सुख्खै छैन। तर एमाओवादी अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भनेर अरु दलहरूले उसलाई बढी अचेट्न खोज्नु पनि उचित हुदैन। किनभने त्यसो गर्दा निकास निस्किन अरु ढिलो हुन जान्छ। त्यसैले अब दलहरू तुरुन्त निर्णायक बार्ताको टेबुलमा बसी सहमतिको प्रयासमा लाग्नु पर्दछ।
तर राष्ट्रपतिको पछिल्लो आग्रह अनुसार दलहरूले असोज मसान्तसम्मको जुन समय मागेका छन् त्यसभित्र पनि उनीहरू बीच कुनै सहमति हुने आशा गर्न सकिने भरपर्दो स्थिति दृष्टि गोचर भईरहेको छैन। त्यसैले असोज मसान्तपछि देशमा अत्यन्त गंभीर स्थिति देखा पर्ने लगभग निश्चित छ।
यसै बीच गैह्र राजनीतिक ब्यक्तिहरूको चुनावी सरकार गठन गर्ने चर्चा पनि बिस्तारै चलिरहेको छ। र, यस कुरालाई सान्दर्भिक तुल्याउन बंगलादेशको उदाहरण दिने गरिन्छ। तर यसो गर्नु भनेको दलहरूको असफलता पुष्टि हुने कुरा भएकोले दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भाबनादेखिदैन। यसै सन्दर्भमा निकासको लागि कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि दलहरूले नै सुझाव देउ भनेर राष्ट्रपति महोदयले बल दलहरूको कोर्टमा फालि दिएका छन्। अब पनि दलहरूले निकास दिने कुरामा सहमति गर्न सकेनन् भने देश अकल्पनीय संकटमा पर्ने निश्चित छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलहरूले लिनु पर्नेछ। त्यस अबस्थामा जनताको बीचमा दलहरूको साख कस्तो हुनेछ? लोकतन्त्र, गणतन्त्र र देशकै अबस्था कस्तो हुनेछ? भन्ने सम्बन्धमा दलहरू विशेष रुपमा गंभीर हुनु आबश्यक छ। अझ पनि दलहरू गंभीर भएनन् भने देश नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने र त्यस अबस्थामा दलहरू र तिनका नेताहरू पनि संकटमा पर्ने कुराको हेक्का दलहरूले समयमै राख्नु जरुरी छ। यसरी अहिले दलहरूको अगाडि ”गर वा मर” को स्थिति आएको छ।
२८ आश्विन २०६९, आईतवार ०८:२७ मा प्रकाशित